အထူး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရေပြင်ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး အတွက် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း လေ့ကျင့် - Yangon Media Group
အထူး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရေပြင်ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး အတွက် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း လေ့ကျင့်
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၃
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်လာပါက ရေပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဇူလိုင် ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း လေ့ကျင့်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
”သဘာဝဘေးကြောင့် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုတွေဖြစ်ရင် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးမှူးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ ရေပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လေ့ကျင့်နေတာပါ။ ပထမငါးရက်က ရေသေဖြစ်တဲ့ ရေကူးကန်မှာ အခြေခံသင်ကြားပြီး အခု ရေရှင် ဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်မှာ လေ့ကျင့်နေတာပါ။ နောက်ရက်မှာ ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်မှာလည်း သွားရောက်လေ့ကျင့်မှာပါ”ဟု ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ဆန်းက ပြောကြားသည်။
ယခုအခါ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကို သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၃၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဆိုပါ အနက်မှ အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ဝ ကို ရွေးချယ်၍ ဇွန် ၂၅ ရက်မှ စတင်ကာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရ ရေကူးချန်ပီယံများက အနီးကပ်စနစ်တကျ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ရေပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး စနစ်တကျသင်ကြားပေးခြင်းကို ဇွန် ၂၅ ရက်မှ ဇူလိုင် ၆ ရက်ထိ ၁ဝ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိပြီး မီးငြှိမ်းသတ်ရေး လှေများ၊ ကယ်ဆယ်ရေးလှေများ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီများ၊ ကယ်ဆယ်ရေးဗောကွင်းများ၊ ကြိုးများအသုံးပြု၍သင်ကြားပေးလျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးတောင်တက် စက်လှေကား အကြီးစား ပြုပြင်ပြီးပါက စီးနင်းခ ကောက်ခံတော့မည် မဟုတ်၊ ဓာတ်လှေကာ?
အစ္စရေးစစ်တပ်က အနောက်ဘက် ကမ်းခြေကို တိုက်၊ ဟားမတ်စ် အဖွဲ့ဝင်သေဆုံး
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ စိတ်ဝင်??
ပါတီချင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်၏ အဆိုပြုချက်ကို ဒီချုပ် လက်ခံ